Mursal oo sharcidarro ku tilmaamay dhaarintii Wasiirka Amniga | KEYDMEDIA ONLINE
Mursal oo sharcidarro ku tilmaamay dhaarintii Wasiirka Amniga
Maxamed Mursal, ayaa soo saaray waraaq ujeedkeedu yahay, inuu rajo u abuuro Golihii shacabka ee waqtigu ka dhamaatay.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waraaq ka soo baxday Guddoonka Golaha shacabka ee waqtigoodu dhamaaday 27 December ee sanadkaan, ayaa sharci-darro lagu tilmaamay habkii ay Xukuumaddu maanta u dhaarisay Wasiirka Amniga Cabdullahi Maxamed Nuur.
War ka soo baxay Xaafiiska Guddoomiyihii baarlamaankii waqtigu ka dhamaaday, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa lagu yiri, “Xubin ka mid ah Golaha Fulinta ayaad magacowday, ansaxisay isla markaana dhaarisey isla xubin iyaga ka mid ah, taas oo si cad u baalmarsan kala soocnaanta Xilalka iyo Awoodaha Hay'adaha Dawlada ee Laanta Sharci Dajinta, Laanta Fulinta iyo Laanta Garsoorka”.
Mursal, wuxuu ka mid yahay kooxda Farmaajo hoggaamiyo ee Fahad ka amar qaata, wuxuuna hormuud u ahaa, muddo kordhintii fashillantay ee hay’adaha Dowladda waqtiga loogu kordhiyay bishii April, taas oo sababtay inuu inuu dalka qarka u fuulo dagaallo sokeeye.
Guddoomiyihii hore ee Golaha Shacabka, Mursal, wuxuu caan ku yahay ku tumashada sharciga, wuxuuna u muuqdaa inuu u durbaan tumayo in mar kale Caasimaddu marti galiso dagaallo, kadib dhacdooyinkii bartamihii April.
Muddo Xileedkii Baarlamaanka 10-aad, waxa ay soo idlaatay, dhamaadkii sanadkii hore, waxaana hadda la soo doortay xuno ka mid ah Baarlamaanka 11-aad, taas oo albaab kasta ka soo xireysa fidanada uu Maxamed Mursal u soo dhiibay Farmaajo.
Kooxda F&F hoggaamiyaan, ayaa geed dheer iyo gaaban u koraya si ay eedeysane Fahad ka badbaadiyaan gacmaha sharciga, waxayna rumeysan yihiin in tallaabada kaliya ee uu ku badbaadi karo ay tahay in Golihii shacabka ee waqtigu ka dhamaadau ay xilka ka qaadan RW Rooble, si ay Muqdisho u marti galiso dagaalo kharaar.
RW Xukuumadda Soomaaliya, ayaa la filayaa inuu xubno cusub oo ka tirssan Xukuumaddiisa xilalka ka xuyuubiyo, inkastoo uu xalay guud ahaan Golaha Wasiirrada u diray farriin uu ugu sheegayay in ay howlahooda wataan, isla-markaana uu kalsooni ku qabo.